Uwafumana njani amatye asimahla kwiiBrawl Stars | I-Androidsis
UDaniPlay | 28/04/2021 09:08 | Imidlalo ye-Android
Mhlawumbi yenye yeemidlalo zevidiyo ezonyukayo nangona ibikho simahla kangangexesha elithile kwiinkqubo ze-Android kunye ne-iOS. Ukuqaliswa kwayo ekupheleni kwe-2018 kuyenze yabamba ukhuphelo oluninzi, efikelela namhlanje ngaphezulu kwe-100 yezigidi kwi-Android kwaye phantse inani elifanayo kwisoftware ka-Apple.
Kwiinkwenkwezi zeBrawl ungaphumelela amatye asimahla, kodwa kufuneka ulumke ngezo zicelo zithembisa ukwenza njalo kwaye umngcipheko wokuba iakhawunti yakho ivaliwe. Zininzi iindlela eziza kukwazi ukufumana eli litye lixabisekileyo onokuthenga ngalo iibhokisi ze-brawl, iibhokisi ze-mega kunye neebhokisi ezinkulu, kunye nabalinganiswa abakhethekileyo, izikhumba, amatikiti kunye neethokheni.
Ngaphakathi kwesi sihloko saziwayo zii-micropayments eziza kuqhubela phambili ngokukhawuleza kwaye zifumane izinto ezahlukeneyo, phakathi kwezinto ezinakho ukwenza ngokwezifiso umlinganiswa. Ngamatye anqabileyo unokwenza izinto ezininziKe ngoko, ukuba baninzi kuya kusivumela ukuba sithenge izinto ezahlukeneyo kumdlalo wevidiyo.
1 Yintoni iBrawl Stars malunga nayo
2 Zuza amatye asimahla ngeebhokisi
3 Zuza iigugu kwiBrawl Pass
5 Ndikunye GameHag
6 Kuthatha ixesha elingakanani ukufumana i-5699 okanye i-8199 Soul Gems? / H2>
7 Ukubaluleka kwamatye anqabileyo
8 Sebenzisa iiGugu ngeClipClaps
9 Dlala ukuphumelela izifuba
Yintoni iBrawl Stars malunga nayo
I-Brawl Stars yindawo yokudlala ekwi-intanethi yabadlali abaninzi ekwi-Intanethi. Injongo yomdlalo kukufumana elona nani liphezulu leendebe neekomityi. Abadlali baya kudlala ngeendlela ezahlukeneyo zomdlalo, kunye nabalinganiswa abohlukeneyo onokukhetha kubo kwaye ngubani oza kulwela ukunyuka amanqanaba.
Abadlali beBrawl Stars baya kuba nakho ukujoyina iiklabhu kunye nosapho kunye nabahlobo, badlale imidlalo kunye, kunye nokudlala ezi ndlela zilandelayo: Ukusinda wedwa, Heist, Siege, Trap, Duo Survival, Brawl Ball, Starfighter, Starfight, uMda othintelweyo, iMegabrawl, kunye nako konke ngokuchasene neNye.
KwiBrawl Stars iindebe ziya kubalwa kwiinkcukacha manani zomdlali, zifumaneka kwiziganeko eziqhelekileyo xa uphumelela umdlalo. Inye into elungileyo ukubaphumelela, kodwa ukuba uyaphulukana nabo baya kuthi shwaka, ke khuphisana ukuze uphumelele kwaye uqokelele ii-maxum kwigalari yakho.
Zuza amatye asimahla ngeebhokisi
Ifomula yokuphumelela amatye asimahla kwiiBrawl Stars kukuvula iibhokisi eya kuba nakho ukufunyanwa ngeempawu ezifanayo kwaye ziya kuhamba wakuba uqhubekile kumdlalo omnye. I-Brawl Stars ineebhokisi ezintathu ezahlukileyo kwaye zezi zilandelayo: Iibhokisi zeBrawl, iiBhokisi eziKhulu kunye neebhokisi zeMega.
Eyokuqala yenye yezona zilula, kodwa ukufumana iibhokisi ezinkulu kunye neebhokisi zeMega ziya kudlala rhoqo kwaye zezona zixabisekileyo kumdlalo. IiMegaboxes ziya kusinika ezinye iigugu ezininzi, Ke ngoko, ukuba ufumana enye, uya kuba nenani elikhulu kuneeBhokisi zeBrawl kunye neebhokisi ezinkulu.
Sinethuba le-10% lokuba ichukumisa iigugu, Iibhokisi zeBrawl ziya kusinika iigugu ezi-5 simahla, iibhokisi ezinkulu ziya kunika ukuya kwi-15 yamatye exabiso kunye neMegaboxes zingasinika ukuya kwi-25 yamatye. Eyokugqibela yenye yezona zibaluleke kakhulu kule Idabi Royale, kodwa yeyona inqabileyo ukuba iphumelele.
IMegabox kuya kufuneka ifumaneke ngokuchitha ubuncwane, Yonke into iya kuxhomekeka kwixesha elinikezelwe ekudlaleni esi sihloko sibalulekileyo siqhubeka nokuba noluntu olukhulu emva kwaso. Ekuphela kwendlela yokuphumelela amatye asimahla kukudlala nokuphumelela amadabi ngokuchasene nabahlobo, abantu esibaqhelileyo kunye nabo balwa nathi.
Zuza iigugu kwiBrawl Pass
Abaqulunqi be I-Brawl Stars ikhupha imowudi yeBrawl Pass amaxesha ngamaxesha, umsitho apho unikezela imbuyekezo ngoloyiso ngalunye kunye nomsebenzi opheleleyo. I-Brawl Pass ineendlela ezimbini, enye yasimahla kwaye enye ihlawulwe, zombini zibalulekile kwaye ngaphezulu kwazo zonke zinomdla.
Umvuzo wokuhlawulwa kweBrawl Pass, ukungena kuwo kuyakuxabisa iigugu ezili-169, ke kufuneka songe ukuba sifuna ukufikelela kule mpumelelo. Ukudlula mahala kwiBrawl Pass kunika ezinye zeebhokisi, iingqekembe, Iitshiphusi kunye namatye anqabileyo, ke uya kukwazi ukufumana amatye asimahla.
Ukwenza yonke imisebenzi oya kuyifumana kwiBrawl Stars zizonke iigugu ezingama-90, yonke into iya kuxhomekeka kumanqanaba oqhubela phambili de ufike esiphelweni. Inqanaba lesi-2 linika amatye anqabileyo ali-10, sele kwinqanaba le-14 ufumana amanye amatye anqabileyo ali-10, ukuba ufikelela kwinqanaba lama-22 baphindaphindwe ngamagama afikelela kuma-20, sele kwinqanaba lama-36 kukho ubuncwane abali-10, kuma-44 amanye amatye ali-10, kuma-52 baya kunika I-10 ngaphezulu kunye nokufikelela kuma-20 ezinye zeempawu ezingama-20. Ukupasa ngakunye ofikelela kuko ziigugu ezingama-90, ezaneleyo ukuzifumana simahla.
Iibhokisi ezinkulu kunye neebhokisi zeMega zithengwa kwivenkile yeBrawl Stars, nangona eyokuqala kubo inokuzuzwa njengomvuzo ngokuphumelela iindebe. Into elungileyo kukunyuka kwinqanaba ukuba ufuna ukuwavula, ke injongo kukudlala rhoqo ukuba ufuna ukufumana iigugu, onethuba le-9% lokuba baya kukuchukumisa.
Rhoqo kwiibhokisi ezilishumi ozivulayo, uyakufumana ubuncinci i-1 ukuze ufumane iigugu, ngenxa yoko mancinci amathuba okuba uthathe ezinye. Iimpawu zibalulekile xa kusiziwa ekuhlawuleni ukuze ufumane izinto ezahlukeneyo, Ukongeza ekungeneni kwiBrawl Pass, apho unamathuba amabini, elinye lawo linamatye anqabileyo.
Ezi bhokisi zahlulwe ngolu hlobo lulandelayo: Iibhokisi zeBrawl, zihlala zinee-gem eziphakathi kwe-3 ukuya kwi-5, ibhokisi enkulu isuka kwi-3 ukuya kwi-15 yamatye, i-megabox ihlala ine-3 ukuya kwi-25 yamatye. Eyokuqala, ngaphandle kokungabikho kobuninzi, yeyona isichukumisayo amaxesha amaninzi kunesibini okanye eyesithathu.
IGamehag liphepha apho unokufumana khona iigugu zomphefumlo kwaye ubatshintshise ngamatye anqabileyo avela kwiBrawl Stars, utshintshiselwano olusemthethweni lwesi sihlandlo. Ngale ndlela awuyi kugwetywa okanye uvotwe ziiseva, yenye yezomthetho kwaye ibalulekile, kuba isetyenziswa ngabantu abaninzi namhlanje.
Imisebenzi ekufuneka yenziwe yile ilandelayo: Dlala imidlalo, dlala iminigames, ugqibe umsebenzi, ulayishe iividiyo ku-YouTube uthetha ngeHamegag, nqanaba, mema abahlobo, yenza uphando, ukhuphele usetyenziso, Khuphela usetyenziso lweMidlaloHag, thetha kwiiforamu, yabelana ngomxholo kuFacebook kwaye wenze i-imeyile isebenze.
Nje ukuba ube nexabiso lomphefumlo elingu-5.699 ungalitshintsha malunga ne- $ 10, Ezimalunga ne-130 zamatye anqabileyo avela kwiBrawl Stars, ethi ekugqibeleni ibe yile nto siyifunayo, ukufumana iigugu. Ukufikelela kwiigugu eziyi-8.199 zomphefumlo, utshintsho lunika malunga ne-15 yeedola, ethi kutshintsho ijikeleze i-200 gem malunga. Ngala matye ungathenga iBrawl Pass.
Kuthatha ixesha elingakanani ukufumana i-5699 okanye i-8199 Soul Gems? / H2>
Ngexesha eliphezulu le kwiveki enye kuya kuba lula ukufumana iigugu ezininzi zomphefumlo ukuzitshintshela kwiBrawl Stars GEMS. Ukwabelana ngomxholo kuya kukuzuzela amanqaku amaninzi kwaye konke kwenzekile ngokuzinikela okungenani iyure enye ngosuku, phakathi kwe-2 ukuya kwi-3.
Ukuba uthatha isigqibo sokudlala imidlalo ye-GameHag, ixesha liya kuhamba kwaye eyona nto intle kukuba ukwazi ukufumana iigugu zomphefumlo ukuze uzitshintshisele kwiigugu zomdlalo wevidiyo we-Android. I-Brawl Stars izuza koku kubulela kwisivumelwano ekufikelelwe kuso yiGameHag, kwelinye icala ibisoloko inika iigugu ixesha elide.
Ubuncinci beedola ezili-10 (5.699) bunokufezekiseka ngabantu abaninzi ngexesha eliqala ukusuka kwiintsuku ezi-4 ukuya kwezi-5, kodwa konke oku kusenziwa ngumsebenzi wasekhaya, ukudlala nokunye okuninzi. I-GameHag yinkonzo esebenza kakuhle kwaye ngaphandle kokuba yenye yezona zisetyenziswa kakhulu luluntu lweBrawl Stars, ngaphezulu kwesiqingatha sokuyisebenzisa ukongeza iigugu.
Ukubaluleka kwamatye anqabileyo
Iimpawu zivula indlela kwizinto ezininzi kwiiBrawl Stars, Kungenxa yoko le nto abo bafuna ukubaphumelela ukuba bongeze uninzi ukuze bathathe inyathelo eliya phambili emva kweeyure ezininzi zokudlala. Ngamagugu ungathenga ezi zinto zilandelayo: Abalinganiswa, izikhumba, iibhokisi, iBrawl Pass kunye neethokheni eziphindaphindayo.
Iimpawu ziya kukwenza uqhubele phambili kumdlalo, kwaye ngaphezulu kwako konke, yenza ngokwezifiso abalinganiswa ukuba babonise ulwandle olulungileyo kwimidlalo. KwiBrawl Stars iigugu zinelona xabiso lazo liphambili fumana ukuphucula izinto ezithile, ngaphandle kokuzithenga kwiVenkile yokudlala.
Akukho sidingo sokutyala imali emzimbeni Ukuba ufuna ukuqokelela amatye simahla, ukudlala kunye nokuchitha ixesha uya kufumana uninzi lwazo oluya kuthi ekugqibeleni lusebenzise okufanayo, qhubela phambili. Iimpawu zeBrawl Stars ukufumana uninzi ziya kukuvumela ukuba ufumane izinto ezininzi, kubandakanya iibhokisi.
Sebenzisa iiGugu ngeClipClaps
I-Clapcoins inokutshintshwa ngeedola okanye kwizifuba, IiClapcoins zibalulekile kwiClipClaps, yiyo loo nto xa udlala ukuze ufumane iigugu yindawo ebalulekileyo. Ndiyabulela kwiidola oya kuba nakho ukuzitshintshisa ngamatye anqabileyo, ekugqibeleni abalulekileyo xa kufikwa ekuwananiseni ubuncwane obuxabisekileyo beBrawl Stars.
Eyona nto intle kukuba yamkela onke amazwe, ke ukuba useSpain ungandwendwela indawo yeClipClaps ukufumana imali kwaye ekugqibeleni ubatshintshisele ngamatye anqabileyo. Ukuba ufumana iidola ezili-10 okanye ezili-15 yanele imali ukuze ukwazi ukufikelela kwinjongo ozibekele yona kwasekuqaleni.
Dlala ukuphumelela izifuba
Ngokuzinikezela iiyure zomhla kwiBrawl Stars uya kongeza amava kwaye ngaphezu kwako konke uyakufumana izifuba ezibubutyebi obuxabisekileyo kwaye kunye nazo neempawu ezinqabileyo ozifunayo. Kuxhomekeka kuwe ukuba urhola ngaphezulu okanye ngaphantsi, kodwa ngaphezulu kwako konke okukhoyo kuninzi xa uvula iibhokisi.
I-GameHag yenye yeenkonzo eziqhubeka nokusebenza ngokugqibeleleyo, ziluncedo lokuhlala unazo ukuze ufumane iigugu zasimahla, zonke ezisekwe emsebenzini kunye nokuzincama. Ngaphandle koko, yenye yezo zisemthethweni kwaye bayaqhubeka nokusebenza ngokugqibeleleyo ngaphandle kwesidingo
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Uzifumana njani iigugu zasimahla kwiiBrawl Stars
I-WIKO VIEW 5 Plus: Uhlalutyo, iiNkcazo kunye neXabiso